Abiy Axmed: Geeri ayaan ka xigaa inaan xukunka wareejiyo - Caasimada Online
Home Warar Abiy Axmed: Geeri ayaan ka xigaa inaan xukunka wareejiyo
Abiy Axmed: Geeri ayaan ka xigaa inaan xukunka wareejiyo
Addis Ababa (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya, Abiy Axmed oo kulan gaar ah lalahaa hoggaanka sare ee xisbigiisa Prosperity Party ayaa laga duubay cod halis ah, kaas oo uu kaga hadlay mustaqbalkiisa hoggaamineed ee wadanaakasi Itoobiya.
Waxa kale oo uu intaasi sii raaciyey “”Ma jirto cid awood u yeelan karta in dowlad ay soo dhisto 10-ka sano ee soo socota, geeri ayaana ka xigaa intii aan xilka wareejin lahaa” ayuu yiri, iyada oo intaasi kadib codka lasoo duubay laga maqlay sawaxan iyo sacab isla-socda.
Ra’iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale wuxuu codkiisa muujinayaa inuu ku shuban doono doorashada ka dhaceysa Itoobiya, isaga oo boggaadiyey kooxda ka shaqeyneysa.
“Doorashada waa ay dhaceysaa, kooxda aan sameynay shaqo adag ayey qabteen, waxaa dhici doona dhimasho iyo dhiig , sida ay doonto ha ahaatee, shaki iigama jiro inaan ku guuleysannay doorashada, weliba qaab sahlan,” ayuu markale yiri Abiy Axmed.
Codkan oo halis weyn ku ah dimuqaaraadiyadda dalka Itoobiya ayaa si weyn u gil-gilay Itoobiya oo sanadihii u dambeeyey wajaheysay xaalado adag oo ka dhashay dagaalladii ka dhacay waqooyiga dalkaas, gaar ahaan gobolka Tigray oo ay warareen ciidanka dowladda.
Dhinaca kale xafiiska ra’iisul wasaare Abiy ayaa ka hadlay arrintan, wuxuuna sheegay in codka uu yahay mid la’isku keen-keenay iyada oo la adeegsanayo codad kala duwan.
“Codka loo maleynayo in laga soo duubay Ra’iisul Wasaaraha xilli uu ku sugnaa shirka xisbiga haya talada toddobaadkii lasoo dhaafay, codkaas waa mid been ah oo laisu geeyay, waxaana laga soo qaatay codad kala duwan oo kasoo baxay Ra’iisul Wasaaraha, isbaddalo badan ayaa lagu sameeyay si looga dhigo hal cod” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Abiy.
Si kastaba dowladda Itoobiya ayaa haatan wajaheyso xaalad adag, iyada oo ay ku kacsan yihiin qowmiyada qaar, sidoo kalena ay usii dheer-tahay dagaalka ay kula jirto TPLF.